Madaxweyaha dowladda Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni
GAROWE, Puntland - Madaxweyaha dowladda Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa ka tacsiyeeyay geerida Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga maamulka Jubaland, Shaafi Raabi Kaahin.
Marxuumka ayaa ku naf-waayey weerar is-qarxin ah oo argagixsada Al-Shabaab kula eegatay caasimada ku meelgaarka Jubaland gaar ahaan banaanka Masjid kadib Salaadii Jimcaha.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Deni ayaa lagu sheegay in uu murugada iyo tiiraanyada la wadaagayo qoyska marxuumka, una rajeynayo soo kabasho deg-deg ah dhaawacyadda kale.
"INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAYHI RAAJICUUN. Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaaya magaciisa, kan Shacabka Puntland, iyo kan Goleyaasha Dowladda ayaa tiiraanyada la wadaagay shacabka Jubaland geerida naxdinta leh ee ku timi Alle naxariistii Janno haka waraabiyee Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubaland Shaafi Raabi Kaahin oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax ay argagixisadu soo maleegtey maanta, kaasi oo ka dhacay Kismaayo," ayaa lagu yiri.
Bayaanka ayaa la raaciey: "Madaxweyne Deni ayaa Alle SWC u waydiiyey inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo marxuumka, isaga iyo muwaadiniinta kale ee ku waxyeelowdey qaraxaasi, samir iyo iimaanna Alle kasiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Jubaland, eheladii, qaraabadii, qoyskii iyo asxaabtii, uu ka baxay marxuumku".
"Sidoo kale Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Alle uga baryey intii dhaawacantay inuu u booga dhayo," ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka.
Ugu yaraan saddex saddex ruux uu ku jiro naftii-haligaha iyo arday kaalinta labaad ka galay Imtixaankii Shahaadiga ahaa ee dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyey in dhacdadaan ay ku geeriyoodeen.
MUQDISHO, Soomaaliya- Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre oo xalay hadal ka jeediyey kulan Muqdisho ka dhacey ayaa si dadban hadal ugu direy madaxda maamulada goboleedyada kuwasoo warmurtiyeed ku aadan xaalada siyasadeed ee Dalk ...
Jubaland oo hakisay ka qeybgalka shirarka deyn cafinta Soomaaliya
Soomaliya 04.03.2020. 16:36
Axmed Madoobe oo shuruud adag ku xiray la shaqeynta DF Soomaaliya
War Saxaafaded 19.01.2020. 15:50
DF Soomaaliya oo "aqoonsatay" maamulka Axmed Madoobe
Puntland 26.12.2019. 22:12
Axmed Madoobe oo laba arrimood ka digay kahor shirka Garowe
Soomaliya 02.05.2019. 21:47
Jubaland oo war cusub kasoo saartay khilaafka Dowladda Soomaaliya
Soomaliya 29.04.2020. 14:00